Mora Tezitra Be Mihitsy Aho fa Niova
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Abua Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kekchi Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mingrelian Mongol Mooré Myama Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Urhobo Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Édo Éwé
“Mora Tezitra Be Mihitsy Aho”
Notantarain’i Cristóbal Díaz
Fiainany Taloha: Nahery setra be ary efa nigadra
NY FIAINAKO TALOHA
Teraka tany San Juan Chancalaito aho. Tanàna kely any Chiapas, any Meksika, izy io. Avy amin’ny foko maya atao hoe Chol ny fianakaviako. Roa ambin’ny folo mianadahy izahay, ary izaho no fahadimy. Nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izahay mpiray tam-po tamin’izaho mbola kely, saingy tsy nampihariko ny zavatra nianarako.
Vao 13 taona aho dia nampiasa zava-mahadomelina sady nangalatra. Niala tao an-trano aho avy eo, dia nifindrafindra foana. Nanomboka niasa tao amin’ny toeram-pambolena rongony aho tamin’izaho 16 taona. Rehefa niasa tao herintaona teo ho eo aho, dia notafihin’ny fahavalonay izahay tamin’izahay nandeha nitaona rongony be dia be tamin’ny sambo, indray alina izay. Mpivarotra rongony koa ry zareo ary nanana basy be dia be. Tonga dia nitsoraka tany anatin’ilay renirano aho fa raha tsy izany voatifitra. Tsy nivoaka tao anaty rano aho raha tsy efa lavidavitra. Nandositra tany Etazonia aho taorian’izay.
Mbola nivarotra rongony ihany aho tany Etazonia, ka vao mainka nahita olana. Voasambotra àry aho tamin’izaho 19 taona, ary nigadra satria hoe nangalatra sady saika namono olona. Niaraka tamin’ny andiana jiolahim-boto izay aho tany am-ponja, ka vao mainka nahery setra. Nafindran’ilay lehiben’ny fonja tany amin’ny fonja tsara ambina tany Lewisburg, any Pennsylvanie, àry aho.
Vao mainka niharatsy be ny toetrako tao amin’ny fonjan’i Lewisburg. Efa nanao tatoazy famantarana an’ilay andiana jiolahim-boto niarahako teo aloha aho. Nisy andiana jiolahim-boto hoatran’ilay izy koa tao amin’ilay fonja, dia mora tamiko ny niaraka tamin-dry zareo. Vao mainka aho nahery setra, ary niditra foana rehefa nisy niady. Indray mandeha dia niady be teo an-tokotanin’ny fonja ny andian-jiolahy anankiroa, dia tao koa aho. Nifamono be mihitsy izahay, ka nifamely tamin’ny hazo filalaovana base-ball sy tamin’ireny fonjam-by fanaovana spaoro ireny. Nampiasa gazy mandatsa-dranomaso ny mpiambina ny fonja tamin’izay mba hanasarahana anay. Nataon’ny lehiben’ny fonja tao amin’ny toerana voatokana ho an’ny gadra mampidi-doza aho taorian’izay. Mora tezitra be mihitsy aho tamin’izany, sady niteny ratsy foana. Nataoko naradratra mihitsy izay nasiako. Dia faly erỳ aho tamin’ilay izy sady tsy mba nanenina izany.
NY NANOVAN’NY BAIBOLY NY FIAINAKO
Natokana irery tao amin’ny efitra nisy ahy foana aho, ka namaky Baiboly no nandaniako andro. Tatỳ aoriana aho dia nomen’izay mpiambina fonja anankiray izay an’ilay boky hoe Azonao Atao ny Hiaina Mandrakizay ao Amin’ny Paradisa eto An-tany. * Lasa tadidiko daholo indray ny zavatra nianarako tamin’ny mbola kely, tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Lasa nampieritreritra be ahy avy eo ny fiainako. Niharatsy be mantsy ny fiainako sady nanao zava-dratsy be dia be aho amin’ilay izaho nahery setra be. Dia lasa tany amin’ny fianakaviako koa ny saiko. Lasa Vavolombelon’i Jehovah ny anabaviko anankiroa, ka nieritreritra aho hoe: ‘Ry zareo izao hiaina mandrakizay! Dia izaho izany ahoana?’ Tamin’izay aho no tapa-kevitra ny hiova.
Fantatro anefa hoe tsy vitako izany hiova izany raha tsy misy manampy ahy. Nivavaka mafy tamin’i Jehovah Andriamanitra àry aho mba hampiany. Nanoratra tany amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Etazonia koa aho hoe te hianatra Baiboly. Nasain-dry zareo nifandray tamiko àry ny fiangonana teny akaikin’ilay fonja. Izay fianakaviako ihany anefa tamin’izany no nahazo nitsidika an’ahy. Nandefa taratasy mampahery ho an’ahy àry ny Vavolombelona anankiray tao amin’ilay fiangonana. Nandefasany boky ara-baiboly koa aho, ka vao mainka lasa te hiova.
Ny niala tao amin’ilay andiana jiolahim-boto no anisan’ny fiovana be nataoko. Efa an-taonany maro mantsy aho izay no tao. Tao amin’ilay toerana voatokana ho an’ny gadra mampidi-doza koa ny lehiben’ilay andiana jiolahim-boto tamin’izany. Indray andro tamin’izahay naka rivotra, dia niteny taminy aho hoe: “Aleo izaho hiala amin’ny ekipa fa te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah!” Tsy nampoiziko mihitsy avy eo ny teniny hoe: “Raha tena te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah ialahy, dia tsy maninona. Izaho indray tsy hiady amin’Andriamanitra. Fa raha hoe te hiala amin’ny ekipa fotsiny ialahy, dia ho hitan’ialahy tsara izany.”
Hitan’ny mpiasan’ny fonja nandritra ny roa taona nanaraka hoe niova be aho. Lasa nalefaka kokoa tamiko àry ry zareo. Tsy nofatoran-dry zareo tamin’ny rojo vy intsony, ohatra, ny tanako rehefa naterina nankany amin’ny efitra fandroana aho. Nisy mpiambina iray izay aza niteny tamiko hoe: ‘Tohizo fa tsara ny ataonao!’ Nafindra tany amin’ny fonja hafa indray aho avy eo, ary tsy dia ambenana be hoatran’ilay teo aloha izy io. Herintaona taorian’izay aho dia nafahana. Folo taona aho no nigadra, dia nafahana tamin’ny 2004 ary naverina teto Meksika. Bisy mpitondra gadra no nitondrana an’ahy.
Nitady ny Efitrano Fanjakan’ny Vavolombelon’i Jehovah aho, raha vao tonga teto Meksika. Tamin’izaho nanatrika fivoriana voalohany, dia akanjo-na gadra no nanaovako satria izay ihany ny akanjoko mba tsaratsara. Nandray tsara ahy daholo anefa ny tany. Tsara fanahy be ry zareo ka hoy aho hoe: ‘Ireto no tena Kristianina.’ (Jaona 13:35) Tamin’io ihany ny anti-panahy dia nitady olona hampianatra Baiboly an’ahy. Natao batisa aho herintaona tatỳ aoriana, tamin’ny 3 Septambra 2005.
Lasa mpitory manontolo andro aho tamin’ny Janoary 2007, ka nampianatra Baiboly 70 ora isam-bolana. Avy eo tamin’ny 2011 aho dia nahazo diplaoma tamin’ny Sekoly Ara-baiboly ho An’ny Rahalahy Mpitovo (antsoina hoe Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana amin’izao). Tena nilaiko io sekoly io mba hahaizako hanao ny andraikitro eo anivon’ny fiangonana.
Faly erỳ aho izao mampianatra ny olona ho tia fihavanana
Nanambady an’i Pilar aho tamin’ny 2013. Hoy izy rehefa mivazivazy amiko hoe: ‘Tsy mampino mihitsy ny zavatra notantarainao momba ny fiainanao taloha.’ Tena tsy nanao hoatran’ny taloha intsony mihitsy mantsy aho. Samy miaiky izahay mivady amin’izao hoe tena mahavita manova ny olona tokoa ny Baiboly, ary izaho no porofon’izany.—Romanina 12:2.
NY SOA NORAISIKO
Hitako hoe izaho mihitsy no anisan’ny noresahin’i Jesosy ao amin’ny Lioka 19:10 hoe “tonga hitady sy hamonjy ny very” izy. Tsy mahatsiaro hoe very izany intsony aho. Tsy mandratra olona intsony koa aho. Tena manampy ahy ny Baiboly satria manana tanjona faran’izay tsara aho izao, sady mihavana amin’ny olona rehetra. Fa ny tena zava-dehibe dia mifandray tsara amin’i Jehovah, Mpamorona antsika, aho.
^ feh. 5 Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah io boky io, fa tsy atao pirinty intsony. Ilay boky hoe Ankafizo Mandrakizay ny Fiainana! indray izao no fitaovana fampianaran-dry zareo Baiboly.
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Herisetra?
Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny herisetra? Afaka miova ve ny olona mahery setra?
Mahaiza Mifehy Tena Rehefa Tezitra
Soso-kevitra 5 avy ao amin’​ny Baiboly, hanampy anao hifehy tena rehefa tezitra.
Hizara Hizara “Mora Tezitra Be Mihitsy Aho”
Mora Tezitra Be Mihitsy Aho
ijwcl no. 2
“Tsy Mahery Setra Intsony Aho”
Vao Mainka Aho Nihanahery Setra
Tsy Nisaraka Tamin’ny Basiko Mihitsy Aho
Navelako ny Basiko